Ihe ị ga-ahụ na Sierra de Gredos: Ọdịdị na obodo akụkọ ihe mere eme | Njem akụkọ
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị ga-ahụ na Sierra de Gredos, anyị ga-agwa gị na ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma na etiti Spain. Ọ na-ekesa n'etiti ógbè nke Toledo, Madrid, Avila, Salamanca y Caceres ma were ihe dị ka hectare puku iri asatọ na isii n'ebe ọdịda anyanwụ nke obodo ahụ. Sistemụ Central.
Ekwuwapụtara ya dị ka ogige mpaghara na 1999 na na njedebe ọdịda anyanwụ ya, enwerekwa ebe nchekwa ihe okike Hells Akpịrị, oghere nke dị n'akụkụ osimiri Jerte nke mejupụtara ohere ịnweta Extremadura si n'ógbè Ávila. Ọ na-etolite ọmarịcha odida obodo nke iyi, waterfalls na waterfalls, yana ọdọ mmiri eke. Ma, n’enweghị mmasị ọzọ, anyị ga-akọwa ihe anyị ga-ahụ na Sierra de Gredos.
2 Ihe nkiri nke Gredos
2.1 Nnukwu ọdọ mmiri
3 ọdọ mmiri ise ahụ
4 Ọdọ mmiri Galin Gomez
5 Obodo ndị ị ga-ahụ na Sierra de Gredos
5.1 oriọna kandụl
5.2 Ụgbọ mmiri nke Avila
5.3 Arenas de San Pedro, otu n'ime obodo kacha mma ịhụ na Sierra de Gredos
N'ịdị elu nke mita 2592, ugwu a bụ nke kachasị elu na Sierra de Gredos. Ya mere, site n'elu ya ị nwere echiche magburu onwe ya banyere ogige ntụrụndụ eke. Nke ụzọ njem nke na-eduga na ọnụ ọgụgụ kasị elu bụ ndụmọdụ mbụ anyị na-enye gbasara ihe anyị ga-ahụ na Sierra de Gredos.
Dị ka akụkọ ifo, ọ na-enweta aha a n'ihi na Almanzor, onye ndú nke Caliphate nke Córdoba, bụ onye mbụ rutere n'elu ugwu na narị afọ nke XNUMX. N'ịhapụ ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na nrịgo ahụ na-ewe ihe dị ka awa asaa na na, n'akụkụ ikpeazụ, ị ga-arịgo. , ma mgbe niile ị nwere ike ịnọrọ obere ala.
Na mkpokọta, ụzọ ahụ nwere kilomita 19 nke gụnyere ọdịdị ala pụrụ iche dị ka Gredos cirque, nke anyị ga-ekwu maka ya na-esote. Ma, ọ bụrụ na ị naghị enwe ike ịmecha ya n'ụbọchị, ị nwekwara ike ịrahụ ụra n'abalị Ebe mgbaba nke ElolaRight n'etiti circus.
Iji malite njegharị ahụ, ịkwesịrị ịbanye na oku a Ebe ikpo okwu, nke bụ mmalite nke ọtụtụ ụzọ na Gredos. A na-esi n'okporo ụzọ esi enweta ya Hawthorn oghere na ọ bụ nnukwu ọdụ ụgbọ ala.
Na mgbago elu ugwu Almanzor, ị ga-ahụ ihe ịtụnanya eke, mana ndị ka ukwuu na-echere gị ma i rute n'elu. Site na ya, ị nwere ọmarịcha echiche nke Sierras de Béjar na Barco, yana mmiri mmiri rosarito y Ọ ga-ahụ ya.
Ihe nkiri nke Gredos
Dị ka anyị gwara gị, ị ga-eru ya site na-eso ụzọ nke Almanzor Peak, ọ bụ ezie na, n'ụzọ ezi uche dị na ya, ị nwere ike ịnọ na circus. Ya mere, nke a bụ n'etiti mkpọda ugwu nke Sierra de Gredos na bụ ụdị glacier kasị ukwuu na usoro Central Central, nke nwere ihe dị ka hectare iri atọ na atọ.
Dị ka ị maara, glacial cirque bụ nnukwu ịda mbà n'obi na-emepụtaghachi a egwuregwu na nke a na-ebute site na nbibi nke mwụda nke ice na mgbidi ugwu. Gredos bụ ebe obibi nke ewu ewu, nke ihe nlere anya juru ebe niile. Banyere osisi, na-achị piorno, ụdị shrub.
Nnukwu ọdọ mmiri
Nnukwu ọdọ mmiri Gredos
Ma, ikekwe, ihe kacha adọrọ mmasị nke mpaghara a bụ Gredos Lagoon, nke dị n'akụkụ ala nke circus, n'ịdị elu nke ihe karịrị otu puku mita na narị itoolu. Ọ bụkwa nke glacial sitere na akụkọ ifo mara mma ka e kere gburugburu ya. Nke kacha chọsi ike bụ Serrana de la Vera. Ọ na-ekwu na otu nwanyị na-efu efu na mpaghara Vera de Plasencia na-awagharị n'ugwu ruo mgbe ọ ruru ọdọ mmiri ahụ iji imikpu onwe ya ma dịrị ndụ ebighị ebi na ya.
ọdọ mmiri ise ahụ
Ọdọ mmiri ise nke Gredos
Dị ka ị nwere ike iche, Laguna Grande abụghị naanị otu ị ga-ahụ na Sierra de Gredos. Ụzọ njem ọzọ mara mma bụ nke ọdọ mmiri ise, nke chọrọ obere mgbalị, ma na-eduga gị ịchọpụta ndị Cimera, Galana, Mediana, Bajera na Brincalobitos, ha niile n'elu ihe karịrị puku mita abụọ. Site n'ụzọ, n'oge okpomọkụ, ndị kasị nwee obi ike na-agba ume ka ha saa ahụ n'ime ọdọ mmiri ndị a mara mma.
Ụzọ a dị ihe dị ka kilomita iri abụọ na abụọ n'ogologo na-ewe ihe dị ka awa iri na abụọ iji wuchaa ya. Mana ị nwekwara ebe mgbaba ị ga-arahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ kewaa ya ụbọchị abụọ. Na mgbakwunye na nke anyị kwuru na mbụ, e nwere nke sitere na Barranca.
Ọdọ mmiri Galin Gomez
Ọdọ mmiri Nava
Iji mechaa ụzọ njem anyị si na Sierra de Gredos, anyị ga-agwa gị maka nke na-eduga n'ọdọ mmiri Barco ma ọ bụ Galín Gómez. Enwere ọtụtụ ndị ọzọ, mana ndị anyị kọwapụtara gị bụ ndị kacha ewu ewu.
Ụzọ a nwere ndọtị nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita iri abụọ na ise wee pụọ na ya Port nke Umbria, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita iri na anọ n'ịdị elu. Ka ị na-aga na ya, ị nwere ike ịhụ ya gburugburu isi pine ọhịa na nnukwu ugwu ndị ọzọ nke Gredos dị ka oke ugo na Assegai. N'otu aka ahụ, ọdọ mmiri ndị ọzọ na-etolite triangle nwere nke El Barco. Ndi ndị nke Knights na Nava. Otú ọ dị, ikekwe ihe ngosi kachasị mma na-enye site na circus glacier gburugburu mbụ.
Obodo ndị ị ga-ahụ na Sierra de Gredos
Mana ọ bụghị ihe niile bụ ihe okike na mpaghara a nwere ihe ùgwù. Ị ga-ahụkwa obodo nta ya dị na Sierra de Gredos, nke na-emepụta njikọ zuru oke na ọdịdị ala ya. N'ezie, ebe ndị a niile nwere ihe ha ga-eme. Ma, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume anyị ịga leta ha niile, anyị ga-egosi gị ụfọdụ n'ime ndị kasị mma.
Casa de las Flores, isi ụlọ ọrụ nke Candeleda Tin Toy Museum
Anyị na-amalite site na obodo ndịda kacha nke Sierra de Gredos. N'ezie, ọ bụ ezie na ọ bụ ógbè Ávila, ọ dị n'ókè Extremadura. Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị ochie obodo, dị ka ọ pụtara ìhè site na ebe ewusiri ike nke El Raso, nke sitere na Vetton.
Na-esote nke a, na Candeleda anyị na-akwado ka ị gaa na Ụlọ nsọ Chilla, wuru na narị afọ nke XNUMX, n'agbanyeghị na ọ nwere ihe osise si na XNUMXth, na nke Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere, ihe ịtụnanya Gothic malite na mmalite narị afọ nke XNUMX.
Ihe na-atọkwa ụtọ bụ Quarter ndị Juu na Ụlọ Nzukọ Alaeze ya, ihe atụ nke ụdị Neo-Mudejar Madrid. Ma ọzọ ịmata ihe ga- Tin Toy Museum, dị na Casa de las Flores na nke nwere ihe karịrị puku abụọ iberibe.
Ụgbọ mmiri nke Avila
El Barco de Ávila, otu n'ime obodo ndị a na-ahụ na Sierra de Gredos
Obodo a akwụsịghị inwe aha na-achọsi ike ịhụ na Sierra de Gredos. Otú ọ dị, a na-ekwu na ọ sitere na okwu Iberian mmanya, nke pụtara "nzukọ". Ọ nwere ohere dị n'akụkụ mmiri nke osimiri Tormes na dị ka ohere Jerte Valley.
O nwere ihe dị mkpa n'oge ochie nke na-agba akaebe na ya rampi. Na ndị a, ọ pụtara karịsịa na ọnụ ụzọ ámá hangman, ihe owuwu ndị Rom nke nwere mgbaba nwere okirikiri na ụlọ elu abụọ e wughachiri na narị afọ nke XNUMX.
Ọ bụghị naanị ihe atụ nke Middle Ages na El Barco. Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na akwa mmiri Romanesque na nnukwu ụlọ nke Valdecorneja, ma malite na narị afọ nke XNUMX. Ọzọkwa, jide n'aka na ị na-ekiri Main Square na Ụlọ elekere na ụlọ nke ụlọ nga ochie, isi ụlọ ọrụ nke Ụlọ Akwụkwọ Ọchịchị ugbu a.
Banyere ihe nketa okpukperechi nke El Barco, ị nwere Chọọchị nke Assumption nke Lady anyị, nke ka ukwuu n'ụdị Gothic na onye owuwu ya malitere na narị afọ nke XNUMX, yana hermitage nke San Pedro del Barco na Santísimo Cristo del Caño.
Arenas de San Pedro, otu n'ime obodo kacha mma ịhụ na Sierra de Gredos
Ọdọ mmiri ochie nke Hacecabos, na Arenas de San Pedro
Ọ bụ isi obodo nke obodo kacha ukwuu na Sierra de Gredos, yana ndị bi na ya dị 6344. Mmalite ya dịkwa nnọọ ochie, dị ka ọ pụtara na Nkwụnye ego n'ọgba Castañarejo, Neolithic, na Onye Berrocal, Veton.
Anyị na-akwado ka ị hụ na obodo Avila Castle nke Constable Dávalos ma ọ bụ Don Álvaro de Luna, nke e wuru n'etiti narị afọ nke iri na anọ na nke iri na ise na ụdị Gothic. Mana nke Obí eze, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX maka nwa ọhụrụ Don Luis de Borbón, nwanne Eze Carlos nke Atọ, na-agbaso canons neoclassical.
N'otu aka ahụ gothic bụ Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere, nke e wuru na narị afọ nke iri na ise na nke nwere ọtụtụ ihe osise nke bara nnukwu uru. N'ime ha, otu n'ime Virgen del Pilar si na narị afọ nke XNUMX. N'akụkụ ya, ndị Ụlọ nsọ San Pedro de Alcantara, nke bụ ihe ncheta mba, nwere ụlọ ụka eze ebe e liri onye nsọ a ma nọrọ n'ụlọ Franciscan Museum of Sacred Art.
I kwesịkwara ịhụ ochie akwa nke Aquelcabos, narị afọ nke XNUMX; ebe ochie Arab na ndị Juu, na ụlọ ha na-ewu ewu ije, na ụka nke Nwanyị anyị nwanyị mara mma na San Pedro Advíncula. Mana, ịlaghachi nwa oge na ọdịdị nke Sierra de Gredos, ihe dị ka kilomita itoolu site na Arenas, ị nwere ihe ndị a. ọgba ugo, nke nwere ọnụ ụlọ ya mara mma nke puku square mita iri juputara na stalagmites, stalactites na ákwà mgbochi nkume.
N'ikpeazụ, ọ dị ukwuu Ihe ị ga-ahụ na Sierra de Gredos. Ihe ebube ndị dị na ya ga-eme ka ị nwee mmasị na obodo ya ga-eju gị anya na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ncheta ha nwere. Ma, gbasara nke ikpeazụ, anyị achọghịkwa ichefu stewing, na ya samples nke ewu ewu architecture, nke Ọgba ndagwurugwu, ya na ọmarịcha ụlọ ụka Gothic nke ọmụmụ nke Nwanyị nwanyị anyị, ma ọ bụ nke Mombeltran, ya na nnukwu nnukwu ụlọ Dukes nke Alburquerque na ụlọ ya ndị a kpụrụ akpụ. Ị cheghị na Sierra de Gredos kwesịrị ka ị bịa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ihe ị ga-ahụ na Sierra de Gredos